မဲလံတောင်မှဇင်းကျိုက်ရေတံခွန်ခရီးစဉ်မှတ်တမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » မဲလံတောင်မှဇင်းကျိုက်ရေတံခွန်ခရီးစဉ်မှတ်တမ်း
Posted by Mon Lay on Sep 22, 2016 in Local Guides, Travel | 1 comment
ငွေ ၁၇၀၀ဝ တည်းနဲ ့နေ ့ချင်းပြန်ခရီးကိုသွားလို့ ရပါ့မလား…သူများတွေတောင် နေ ့ချင်းပြန်ခရီးကို ၃၅၀၀ဝ ကောက်နေတာလို့ မေးမယ်ဆိုရင် …ပြန်ဖြေပေးမယ်နော်။ ရပါတယ်..တကယ်ကို၁၇၀၀ဝတည်းနဲ ့မွန်လေးသွားခဲ့တာပါ.ကားခအပြီးအစီးပေ့ါဟဲဟဲ(ရေသန် ့ဘူးတော့ပါတယ်)…ထမင်းစားတာသောက်တာတော့ကိုယ့်ဖာသာကြိုက်သသောက်စား၊ကျသလောက်ဆက်ရှင်းပေါ့။
ပထမဦးဆုံးမနက် ၆နာရီကျော်မှာဘုရားကြီးမြို ့ကိုရောက်တယ်။သန်းကြွယ်စားဖွယ်စုံဆိုင်မှာ
..မနက်စာစားကြတယ်.အိမ်ကနေမုန် ့နဲ ့ကော်ကော်သောက်လည်းအဲ့ချိန်မှာပြန်ဆာတာမို ့မုန် ့ဟင်းခါးအိုးဘဲဥလေးနဲ ့အရင်သွပ်လိုက်တယ် (သိပ်မကောင်းဘူး) မိတ်ဆွေတို ့သွားဖြစ်ရင် တခြားဟာမှာစားကြနော်..
ဘီးလင်းမြို ့ကို မနက်ရနာရီကျော် ၈နာရီထိုးခါနီးမှာရောက်သွားတယ်..
ကျာက်ပိရဟန္တာရှိတဲ့မဲလံဆံတောင်ကိုမြို ့ထဲကနေတော်တော်ဆက်သွားရသေးတယ်..တောင်ခြေရောက်တော့ 10နာရီထိုးနေပြီ။.
တောတောင်တွေကိုလှမ်းမြင်ရတာနဲ ့တင်စိတ်မှာကြည်နူးမဆုံးပဲ…ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်တက်သလိုမျိုး ကားနဲ ့တဆင့်ပြန်ခဲ့ရတယ်(ကျိုက်ထီးရိုးကားကအမိုးမပါဘူး။သူကအမိုးပါတယ်)…အဝင်ဝကြည့်လိုက်တော့အတော်မတ်တယ်ပေါ့နော်..နောက်တက်လည်းတက်ရော.နောက်ပို်င်းတွေမှာသိပ်မမတ်တော့ပါဘူး..တစ်ချက်
တစ်ချက် Roller Coaster စီးရသလိုပဲ..အသည်းထဲအေးသွားတာပဲ။သိပ်မကြာပါဘူး ၁ဝမိနစ်ပဲ.
.တောင်ပေါ်ကကြည့်ရတဲ့ရှုခင်းကတော့မွန်လေးအတွက်ဘာနဲ ့မှမလဲနို်င်ပါဘူး။တောင်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ဘုရားတွေကိုသွားဖူးရတာအလိုလိုကိုကြိုက်တာ..ပျော်တယ်ပေ့ါနော်။ပုဂံဘုရားသွားဖူးတုန်းကလည်းတန် ့ကြည်တောင်ဘုရားကိုသွားဖူးရတာအတော်ပျော်တယ်။
“ဘီးလင်းမြို့ မဲလံတောင်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး ဝိပါတ်ဝဋ်ကြွေးကြောင့် ကျောက်တုံးပိပြီး ပရိနိဗ ္ဗာန်ပြုရတဲ့ ရဟန္တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုတောင်းအလွန်ပြည့်ပြီး အခက်အခဲအကျပ်အတည်းတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါ ဆုတောင်းအဓိဌာန်ပြုရင် အလုံးစုံပြေပျောက် တယ်လို့ဆိုပါတယ်။”
အမှန်က အဲ့ရဟန္တာက ဖားလေးကိုသူပြန်လာရင်အသက်ကယ်မယ်ဆိုပြီးကျောက်တုံးအောက်မှာထားခဲ့ရာကနေ သူပြန်လာရောအဲ့
ထူးဆန်းတဲ့ ကျောက်ပိရဟန္တာကို မရောက်ဖူးသေးသူများလဲ သွားရောက်ဖူးမျှော် ဆုတောင်းသင့်ပါတယ်လို့
ဇင်းကျိုက်မြို ့ကိုရောက်တော့ နေ ့လည်၁နာရီထိုးနေပြီ။ ဗိုက်ကလည်းဆာတာနဲ ့သူတို ့ညွှန်ပြရာစားသောက်
ဆိုင်မှာအဝစားထမင်းနဲ ့ဟင်း၁၅၀ဝဖိုးလောက်စားပလိုက်တယ် (အူမတောင့်မှသီလစောင့်မယ်ဆိုတော့လေ)။
အဲ့စားသောက်ဆိုင်ကနေ ရေတံခွန်ဆီလှမ်းမြင်ရတဲ့ရှုခင်းကလည်းမိုက်၊ ကလေးလူငယ်လူကြီးကျားမမရွေးရေ
အဲ့ရေတံခွန်ရဲ ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကို အလယ်ကနေ ဝါးတံတားထိုးတော့တစ်ဖက်ကမ်းကစားသောက်ဆိုင်တွေ
သတိတော့ထားရတာပေါ့နော်။ချော်လဲနိုင်ပါတယ်။တချို ့ကလည်းရေကူး၊တချို ့ကလည်းရေဆော့၊ရေစိမ်နဲ ့
(၂၀၀)ပဲပေးရတယ်..သန် ့တယ်..တန်တယ်။ညနေ ၃ခွဲလောက်မှာပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။
အပြန်ခရီးမှာအိမ်ပြန်လက်ဆောင်အတွက်ကျွဲကောသီးတို ့ဒူးရင်းသီးတို့ ကလည်းမဝယ်မဖြစ်ဝယ်ခဲ့တယ်။
အတွက်ရပ်ပေးပါတော့တယ်။ညစာစားပြီး ရန်ကုန်ကိုမောင်းနှင်လာခဲ့တာ ည၁၁နာရီမှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာ
PS: အဲ့လိုခရီးတွေကိုလိုက်ပါခံစားချင်ရင်တော့ …Just Follow me!! ….မွန်လေးနဲ ့လိုက်ခဲ့လို့ရပါတယ်…..Free & Easy tour ပဲစီစဉ်ပြီးစရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ ့ကမ္ဘာပတ်ကြမယ်…..09421045685
Mon Lay has written 458 post in this Website..
Shar Thet Man (116180 Kyats )